संस्मरणः लोककथा | Ratopati
personपूर्ण ओली exploreकाठमाडौं access_timeजेठ २४, २०७७ chat_bubble_outline0
आमाको आश्वासनले हामीमा कमाल गर्थ्यो । हत्तपत्त मुछेर फालिसकेको दालभात सप्र्‍याकसुप्रुक खान थाल्थेँ म । तिउन मिठो भएन भनेर लात्तीले पर हुत्त्याइसकेको थाली वर तान्दै दाइले मुठीभरि भात पारेर मुखमा बुकाउन थाल्थे । मन दिदीले "तेसोभया अरु भात थप्देऊ जेई !" भन्दै थालीमा भएको खानाको थुप्रोमा अरु भात थप्न लगाउँथिन् ।
"दिदै, भन क्या, किन ज्या त्यस्तोरो अत्तालिएकी हुन् ?" हामीले दिदीहरुसँग निधिखुदी गरिरह्यौँ । हाम्रो धेरै करकापपछि बल्ल ठूल्दिदीले रहस्य खोलिन्,"हाम्रा माइलामामाको काल भयो!" उनी भक्कानो छोडेर रुन थालिन् । त्यो अनपेक्षित खबरले हाम्रो कलिलो हृदय पनि धुजाधुजा भएर च्यातियो । फलस्वरुप हामी केटाकेटीमा रुवाबासी शुरु भैहाल्यो । त्यो दिन स्कूल जान नसकेर हामी आधा बाटोबाटै घरमा फर्कियौँ ।
आमाबा र छरछिमेकले माइजुलाई सम्झाउँथे,"धैर्य गर् बुहारी । यी कलिला दुई बच्चाहरुको मुख हेरेर भए पनि चित्त बुझा ।"
मैले प्रकाशलाई काठको पाटीमा खरीले लेख्दै कख सिकाउन थालेको थिएँ । लोकबहादुर कहिलेकाँही हाम्रो घरमा उक्लिन्थ्यो र भाइलाई सिकाउँदा छेउमै आएर हेरिरहन्थ्यो । "बस् न बाबु, तो पनि सिक् !" भन्दै उसलाई तान्थेँ म । ऊ केही बोल्दैनथ्यो । मेरो हात फुत्काउँथ्यो र दगुर्दै आफ्नो घर गएर आफ्नी आमाको काखमा घुस्रेर क्वाँ क्वाँ रुन्थ्यो । सायद उसको मनले भन्थ्यो'मलाई पनि त्यस्तैगरी क ख सिकाइदेऊ है जेइ !'माइलीमाइजु अनपढ थिइन् । ऊ आफ्नी आमाले आफूलाईसिकाउन किन जान्दिनन् भन्ने बुझ्दैनथ्यो, विकल्पमा आफ्नी आमासँग बाबुको सोधखोज गर्दथ्यो । त्यसको बनीबनाउ शाब्दिक जवाफ उसकी आमाले दिन सके पो ! बरुउनी कहाली लाग्दो रोदनमा विस्फोट हुन पुग्थिन् । आफूले बाबु खोज्नेबित्तिकै आमा रोइहाल्ने भएकोले बाबुलाई सोध्नै छोडिदिएको थियो लोकबहादुरले ।
६ वर्षको उमेर पुगेपछि प्रकाशलाई हामीले स्कूल पठाउने निर्णय गर्यौँम ।प्रकाश स्कूल जाने भएपछि माइजुले पनि लोकबहादुरलाई स्कूल पठाउन तम्सिइन् । यो थाहा पाएर माइलीआमाले पनि डिल्लीलाई पछि लगाइन् । तीनजना नै स्कूल जाने भएपछि निशासँग खेल्ने साथीहरु कोही भएनन् ।उसले पनि 'दाइसँग जाने !' भन्दै जिद्दि गर्न थाली । घरमा उसको लागि छुट्टै धरालो कोही थिएन । तसर्थ उसलाई पनि स्कूलमै पठाउनु सुविधापूर्ण थियो । एउटै आँगनमा खेल्ने फुच्चेहरुको रहर लाग्दो लर्को अब स्कूलसम्मै पुग्ने भयो । लोकबहादुरकी बहिनी भने अझै सानी भएकोले आफ्नै आमासँग बस्ने भई । हामीहरु ती फुच्चाफुच्ची स्कूल जाँदा र फर्कँदाको दृश्य हेरेर मन्त्रमुग्ध हुन्थ्यौँ ।डिल्ली केही समयपछि आफ्ना बाबुआमासँग दलाखेततिर लागेकोले पढाइ छोडिदियो ।
सोलाबाङ स्कूलका हेडसर द्रोण पुन थिए । स्कूलको शुरुकै दिनमा प्रकाशले हेडसरलाई एकलाइनको चिठ्ठी लेखेर बुझाएछः "मेलो घलमा आम छन्, खान आऊ ।"
त्यो बेलुका प्रकाशको चिठ्ठी बोकेर हेडसर आँप खान घरमै आइपुगे । प्रकाशको चमत्कारको हामीसँग खुशियाली बाँडचुँड गर्दै यी केटाकेटीहरु तिक्ष्ण दिमागकारहेछन् भन्दै बढाइचढाइ गरे । मैले प्रकाशको अनपेक्षित प्रगतिको खुशीको मारवश् उसलाई अँगालो मारेँ । लोकबहादुर भने आँखामा आँशु उमारेर यो दृश्य हेरिरह्यो । "तँ पनि आइज !" भन्दै लोकबहादुरलाई तान्दा पनि मेरो काखमा आउन मानेन, बरुआफ्नो घरतिर खुर्र दगुर्योश ।आफूलाई अँगालो मार्ने बाबुको खोजीमा दौडियोभन्ने चाल पाएर म तर्सिएँ,अब माइजु पक्का अलापविलाप गर्दैरुनेछिन् ।
"तेरो एक मात्र सहारा यही छोरा हो । सर्वस्व यही हो चित्त बुझा । तँले नै मन बाँधिनस् भने यो लख्याको के हालत होला ?"हिक्का छोड्दै परपर भागिरहेको लोकबहादुरलाई ल्याएर गाउँलेहरुले अर्धमुर्छित माइजुको काखमा बसालिदिन्थे । माइजुको आवाज त बन्द हुन्थ्यो तर हिक्का केहीगरी बन्द हुँदैनथ्यो । थप बज्रपातको मारवश् माइजु चिन्ताले गर्दा धाइरोको काठसरि सुक्दै जान थालिन् । कान्छामामा सानैमा मानसिक रोगले पिडित थिए । उनको खान बस्नको ठेगान हुन्नथ्यो । त्यो परिवारलाई सम्हाल्ने थला परिसकेका काइँला बाजे मात्र थिए ।
आफ्नो अवस्था नाजुक हुँदै गएको देखी माइजु गाउँलेहरुसँग अनुनय विनय गर्थिन्,"मलाई जसरी पनि बचाऊ । म नै सक्किएँ भने यो जाइनले के गर्ला ? यो टुहुरालाई हेर्ने यो संसारमा कोही पनि हुनेछैन ।"
आमाहरु सम्झाउँथे,"तँ चिन्ताले नै मर्दैछेस् । तैँले आफूलाई आफै मारिरहेकी छेस् । छोराको माया छ भने चिन्ता छोड्दे बाबु । उठ् बुहारी उठ् । छोरालाई हेर् बाबु ।"
"मके गरूँ ? यो चिन्ता हट्ने कुनै ओखती छ भने म जे पनि खान तयार छु । तपाइँहरुले हगेकै गु खान तयार छु । मलाई केही न केही बचाउने ओखती गर । म बाँच्दिन कि ?" माइजुको यस प्रकारको अलापविलापले गाउँलेहरुको हृदय छियाछिया बनाइदिन्थ्यो ।
परीक्षा सकिएपछि केही दिनमा रिजल्ट पनि भयो । रिजल्टको दिनमा तीनभाइबैनी नै स्कूल गए र बेलुका सबै भाइबैनी अबिरले पूरै जीउ रङ्गिएर घर फर्किए । कक्षा एकको परीक्षामा प्रकाश प्रथम भएछ । लोकबहादुर दोस्रो भएछ । यो प्रगति देखेर हामीहरु खुशीको मारवश् उफ्रियौँ । मलाई लाग्यो छोराको यो खुशी देखिन् भने माइजुलाई पक्का पनि अलि हल्का हुनेछ भन्ठान्दै लोकबहादुरलाई डोर्याोउँदै म माइजुकहाँ पुगेँ । माइजुलाई भित्री मैरोबाट बाहिर ओटामा सारिइसकेको रहेछ । आफ्नो अन्त्यहेर्न आउने आफन्तहरुबाट माइजु घेरिएकी थिइन् ।"माइजु ! माइजु !!!" मैले बोलाएँ । माइजुलाई आँखा खोल्न निकै गाह्रो भयो । बल्लतल्ल आँखा खोलिन् ।
"माइजु लोकबहादुरले त कमालै गरेछ । सेकेन भएछ ।", म चिच्याएँ । उनले लोकबहादुरलाई आफ्नो छेउमा आउन इशारा गरिन् । माइजुको स्वर समेत बन्द भैसकेछ । लोकबहादुर आफ्नै आमाको नजिक जान डराएजस्तै गर्योो । मैले उसलाई उठाएर सुतिरहेकी माइजुको काखमा बसालिदिएँ । माइजुले लोकबहादुरलाई तानिन् र आफ्नो अँगालोमा बेरिन् । उनको आँखाबाट बर्बर्ति मोटामोटा आँशु लोकबहादुरको गालामा खस्न थाले । माइजु बेहोस् हुन्छिन् कि भन्ने डरले वरिपरिका मान्छेहरुले माइजुको बाहुपासबाट बल्लतल्ल लोकबहादुरलाई फुत्क्याए । लोकबहादुर हिक्का छोड्दै घरको घारी करेसातिर दगुर्योम ।
मैले लोकबहादुरले स्कूलमा गरेको प्रगतिको कुरा त्यहाँ भएभरका गाउँलेलाई सुनाइदिएँ । सबैले अच्चम्म मान्दै जिब्रो टोके,"यस्तो विपरीत परिस्थितिमा पनि स्कूलमा सेकेन आउनु चानचुने कुरा थिएन ।यति तेज छोरोले अनुकूल अवस्था भैदिए कति प्रगति गर्दो हो ! हे भगवान्, यसकी ज्यालाई केही पनि नहोस् ! यही टुहुराको लागि भए पनि यसकी ज्या बाँचोस् !" गाउँलेले पुकारा गर्न थाले ।
रिजल्टमा म पनि उनीहरुको स्कुलमा पुगेँ । प्रकाश स्कूलकै होलफस्ट भयो । डिल्ली तल्लो कक्षामा फस्ट भयो । लोकबहादुर भने कक्षामा चौथो स्थानमा झर्न पुगेछ । जे भए पनि प्रकाश, डिल्ली, लोकबहादुर र निशाले बराबर अबिर घस्न पाए । अबिरले पूरै रङ्गिन पाउँदाचारभाइबैनी औधि खुशी देखिए । मैले भने आफूलाई थाम्नै सकिनँ, फलस्वरुप आँशुको दहमा पौडिन थालेँ । हेडसर भूपेन्द्रले अच्चम्म मान्दै मलाई सोधे,"के भयो ?"
अब लोकबहादुर हाम्रै घरमा बस्न थाल्यो । मैले प्रकाशभन्दा बढी माया उसैलाई गर्न थालेँ । उसैलाई बढी सिकाउन थालेँ । ऊ पनि दिउँसो स्कूल जाने र बिहान बेलुका मेरै वरिपरि बस्न मन पराउन थाल्यो । स्कूलमा कुनै प्रतियोगिता हुने भयो भने भन्थ्योः "दाइ, मलाई कविता लेखिदिनू न !"
मैले भन्थेँ,"तिम्रो पढाइ त्यति राम्रो छ । मेरो भन्दा त तिमी नै राम्रो लेख्न सकौला ।"
ऊ भन्थ्यो,"म हजुरजति सक्दिन दाइ ।" यसो भनिरहँदा उसको अनुहार निकै अँध्यारिन्थ्यो । उसको अँध्यारोपनले मलाई विगतको धारिलो पत्थरमा बजारिदिन्थ्यो र म रक्तमुच्छेल हुन्थेँ । सतर्क हुँदै भन्थेँ,"ल ल, म लेखिदिन्छु तर राम्रोसँग वाचन गर्न जान्नुपर्छ नि । जतिसुकै राम्रो लेखिदिए पनि वाचन गर्न जानेनौ भने तिमी पुरस्कार जित्न सक्दैनौ ।"
"वाचन गर्न त सक्छु दाइ । वाचन गर्दा मेरो ध्यान अन्त नगई कापीको पानामै हुन्छ ।" उसले बुझाउन खोजेको कुरा आँ गर्दै बुझ्थेँ म कि उसमा किन कथा कविता लेख्ने सामर्थ्य छैन भन्ने कुरा । मुटु भक्कानिएर आउँथ्यो । सकीनसकी लोकबहादुर समेतको दुखको भारी आफ्नैमा खप्ट्याएर बोकिदिन्थेँ ।
वार्षिकोत्सवको अघिल्लो दिन बेलुका मकहाँ आएर लोकबहादुरले मलाई फस्ट्याउन थाल्योः "दाइ, मलाई एउटा कथा लेखिदिनु न ।"
"कस्तो कथा लेखिदिऊँ भाइ ?", आफै लेख भन्न सक्दिनथेँ म ।
उसले भन्यो "लोककथा भए पनि हुन्छ ।" म फेरि अरर्रिएँ । यसकै वास्तविक लोककथा लेखिदिएँ भने यसले किमार्थ वाचन गर्न सक्ने छैन ।
"यो धेरै छोटो भयो दाइ । यसले पुरस्कार जित्न सकिँदैन । अर्को कथा लेखिदिनू ।" ऊ त मलाई घोर्न पो थाल्यो ।
"लोककथा छोटै त हुन्छन् नि !", मैले जिद्दि कसेँ ।
"नाइँ के दाइ । अलि लामो लेखिदिनू ।", ऊ मसँग ‍औधि लाडिन्थ्यो । उसको जिद्दिउपर मैले हार खान्थेँ ।
"माइलादाइ ! माइलादाइ !!" कसैले बाहिरबाट ठूलै डाँकोले बोलायो । पानीघट्टको घट्घट् र कुलोको कलकल आवाज जित्नको लागि झन् ठूलो स्वरमा कराउनुपर्थ्यो । घट्टको प्वालमा मकैको ‌ओइरो हाल्दै मैले बाहिरतिर हेरेँ। त्यसरी कराउने लोकबहादुर थियो । ऊ त स्कूल ड्रेसमै आइपुगेको रहेछ । पछाडी झोला बोकेको थियो । अनुहार यति उज्यालो थियो कि जीवनमा पहिलोचोटी उसको सुन्दरताको असली रुप देख्न पाएको थिएँ । म घट्टबाट बाहिर निस्किँदै उसको खुशियालीमा सामेल हुन चाहेँ,"के भयो ? किन यसरी घोक्रो सुक्ने गरी कराको । अलि सानै स्वर पनि सुनिहाल्छु नि म ।"
उसले झोला झिकेर मोटामोटा कापीहरु झिकेर देखाउँदै भन्योः "मैले पुरस्कार जितेँ दाइ ।"
"कसरी यति धेरै पुरस्कार पायौ त ? अरु खेलमा पनि भाग लिएका थियौ ?"
"कहाँ हुनु दाइ ? हजुरका तीनवटै कथाले पुरस्कार जिते नि !"
"अरु साथीलाई पनि बाँडेर वाचन गर्न लगाएँ नि दाइ । उनीहरुले पुरस्कार पाएपछि मलाई नै दिए ।"
"दाइ, म त तपाईँको नियमित पाठक नै हुँ । केही प्रतिक्रिया दिन सक्दिन र मात्रै ।" ऊ स्थानीय सडक पूर्वाधारमा काम गर्दै रहेछ । अपितु फोनमा पहिलेकै घाउ उप्काइरहेको जस्तो लाग्यो ।
"हो भाइ ? पहिले तिमी लेख्न सक्दैनथ्यौ । अहिले म लेख्न सक्दिनँ ।" यो कुरा उसलाई थाहा छ । तसर्थ ऊ पनि फोन होल्डमै बसिदिन्छ र प्रतिक्रियाविहीन भैदिन्छ । केही बेरपछि सोध्छः
"मन दरिलो बनाउनुपर्छ दाइ,यी मलाई हेर्नुहोस् ।"
"त्यो त हो भाइ….., म तिम्रो बारेमा केही लेख्ने सोच्दैछु ।"
फेरि ऊ होल्डमा बस्छ र भन्छः "दाइ, तपाईँको पनि कथा बेग्लै छ नि । थोरै छ, तर निकै गहिरो छ ।"
उताबाट केही बेरसम्म हातबाट तल खसेको फोनमा "हेलो ! हेलो !!" को आवाज आइरहन्छ । फोन उठाउने ताकतसम्म छैन ममा । लामो समयपछि फोन आफै सम्पर्क विच्छेद भैदिन्छ ।
म आफ्नो कथा आफै लेख्न सक्षम छैन । मेरो पूर्णकथा लेखिदिनको लागिअरु कसैले पर्याप्त मात्रामा आँशु र हिक्काको सञ्चय गरेजस्तो लाग्दैन मलाई ।